Ama-plugins we-WordPress ahamba phambili wezindawo zebhizinisi | Martech Zone
ULwesithathu, May 25, 2022 NgoLwesithathu, Juni 15, 2022 Douglas Karr
Okunye ukuduma kwe-plugin ye-WordPress kuqhutshwa ukufakwa komuntu siqu noma okusekelwe kumthengi. Kuthiwani ngebhizinisi? Sihlanganise uhlu lwethu ama-plugins we-WordPress ayizintandokazi esikholelwa ukuthi yenza abasebenzisi bebhizinisi bakwazi ukwenza imali ngokuqukethwe kwabo futhi baqhube imiphumela ngezinjini zokusesha kanye nenkundla yezokuxhumana, ngeselula, ithebhulethi noma ideskithophu… futhi bahlanganise ngokugcwele amasu abo okuxhumana nabantu namavidiyo.
Ngemva kokuthuthukisa ama-plugin e-WordPress adumile, ngihlala nginomdlandla wokuthola nokwabelana ngama-plugin enza umsebenzi omangalisayo wokuthuthukisa, ukwenza kahle, nokwenza imisebenzi ngaphakathi kwe-WordPress. Ama-plugin we-WordPress kokubili ayisibusiso nesiqalekiso, noma kunjalo.
Izinkinga ze-plugin ye-WordPress
Ama-plugins kwesinye isikhathi ayahamba izimbobo zokuphepha ukuthi abaduni bangasizakala ngokufaka i-malware kusayithi lakho.
Ama-plugins kaningi awasebenzisi ngokugcwele Izindinganiso zokubhala nge-WordPress, engeza okungadingekile ikhodi engadala ezinye izingqinamba.
Ama-plugins ajwayelekile ithuthukiswe kahle, kubangela idatha yangaphakathi noma izingqinamba zokusebenza.
Ama-plugins ajwayelekile ayisekelwa, Kukushiya uthembele kukhodi engahle iphume esikhathini futhi inikeze isiza sakho indawo engenamsebenzi.
Ama-plugins angashiya amathani we idatha ku-database yakho… Nangemva kokukhipha i-plugin. Onjiniyela bangakulungisa lokhu, kepha imvamisa ungakhathazeki ngakho.
Ngikholwa ukuthi i-WordPress isinyukile impela, iphelelwa yisikhathi ama-plugins amadala ekubukweni kwayo kwe-plugin bese ivuma ama-plugins amasha ngesandla ukuqinisekisa ukuthi awabhalwanga kabi. Njengoba izimo ze-WordPress ezizimele zikuvumela ukuthi ufake noma iyiphi i-plugin, noma kunjalo, kufanele wenze umsebenzi wakho wesikole noma uthole insiza ethembekile yokwenza izincomo.
Ngokwengeziwe, iningi le- Uhlu oluhle kakhulu lwama-plugins we-WordPress zenzelwe i-blogger yomuntu siqu futhi empeleni azigxili emabhizinisini nasemizamweni yawo eyingqayizivele yokuklama nokuthuthukisa amasu okuqukethwe asiza ukukhuthaza ibhizinisi labo. Futhi, sonke siyakwazi lokho best igama elithi subjective… ngakho-ke sizohamba nentandokazi ukuhlukanisa izincomo zethu.
Ngezansi kukhona isethi ezanyiwe neyiqiniso Ama-plugins we-WordPress webhizinisi esikholwa ukuthi yibo abahamba phambili endaweni ebanzi yama-plugins we-WordPress.
Izintandokazi ze-WordPress Plugins Zokubandakanya futhi Uguqule Abavakashi
IzinkundlaON - Uma ufuna ukwengeza kalula imicimbi, ukubhaliswa, ezindaweni eziningi kusayithi lakho le-WordPress, le plugin isekelwa kahle futhi inethoni yezici.
Gravity Amafomu - Ukwakha amafomu okusheshayo nokulula okunezinhlobonhlobo zezinketho zokumisa ezihlanganiswe kalula nezinsizakalo zezinkampani zangaphandle njenge-PayPal, I-Mailchimp, AWeber, nabanye. Izengezo kanye ne-API kuyatholakala ukuze kusebenze okuthuthukisiwe. Uma usebenzisa I-Elementor Pro, awuyidingi ngoba Amafomu ayisici sayo.
Gqamisa & Yabelana - i-plugin yokugqamisa umbhalo nokwabelana ngayo nge-Twitter ne-Facebook nezinye izinsiza ezibandakanya i-LinkedIn, i-imeyili, i-Xing ne-WhatsApp Kukhona futhi okwakhelwe ngaphakathi kwe-Gutenberg block okuzovumela abasebenzisi bakho ukuthi Bachofoze Ukwabelana.
OptinMonster - Dala ukunaka kokukhetha izinhlobo eziguqula izivakashi zibe ababhalisile namakhasimende. Khetha kuma-popups, imigoqo yonyawo ezintantayo, ama-slide-ins, nabanye ukudala ifomu lakho lokungena kumasekhondi angu-60 flat.
Jetpack - IJetpack iyaqhubeka nokuthuthuka ngazo zombili izinhlobo zamahhala nezikhokhelwayo ezinweba amandla wesayithi lakho leWordPress. Izici ezimbili ezibalulekile engikholelwa ukuthi amandla okwabelana ngomphakathi futhi ubhalise ngezithuthukisi ze-imeyili. Kukhona ithani lezinye izici, noma kunjalo! Ngaphezu kwakho konke, le-plugin yenziwa yi-Automattic ukuze wazi ukuthi ibhaliwe futhi igcinwe emazingeni aphakeme kakhulu.
WooCommerce - ipulatifomu ethandwa kakhulu ye-eCommerce yokwakha isitolo esiku-inthanethi. I-Woocommerce isekelwa ngokugcwele ngethani lezithuthukisi nama-plugins yiqembu kwa-Automattic, abathuthukisi be-WordPress.
Izintandokazi ze-WordPress Plugins zokuthuthukisa ukuphatha kwakho kwe-WordPress
Ukusesha Okungcono Buyisela - kunezikhathi lapho udinga ukwenza ukusesha / ukufaka esikhundleni ku-database yokuqukethwe, izixhumanisi, noma ezinye izilungiselelo. Le plugin iyindlela enhle yokwenza lokho.
Khubaza amazwana - Amazwana ayevame ukuzuzisa kakhulu kokubili amazinga okusesha kanye nokuxhumana nabavakashi besayithi lakho; kodwa-ke, eminyakeni yamuva nje ukuphawula kogaxekile sekucishe kwangalawuleki futhi ingxoxo isithuthele eziteshini zokuxhumana. Le plugin izokhubaza zonke izici ezihlobene namazwana futhi isuse izigaba zamazwana ekushicilelweni kusayithi lakho. Ungaphinda ususe wonke amazwana ashicilelwe.
Iposi eliphindaphindiwe - uma kwenzeka udinga ukuphinda okuqukethwe kwakho, le plugin inikeza ukulawula okunomkhawulo kokuthi yiziphi izindima ezingaphinda okuqukethwe, yiziphi izici eziphindaphindwayo, nokuningi.
Isiphathi Somaka seGoogle seWordPress - phatha yonke imibhalo yakho eyengeziwe nezinye izenzo kusuka ku-Google Tag Manager. Le plugin icaciswe ku-WordPress futhi inikeza ithoni yezinketho.
Uhlu Lweposi Isithombe esifakiwe - ungeza Isithombe Esifakiwe ikholomu kokuthunyelwe komlawuli nohlu lwamakhasi. Ivumela abaphathi ukuthi babone ukuthi yimaphi amaposi noma amakhasi anesithombe esifakiwe.
Okusalungiswa Okusheshayo - Ingabe ulawula okusalungiswa okuningi? Uma kunjalo, le plugin ibeka isinqamuleli esihle kumenyu yakho yomqondisi ezokuletha ngqo kuzinhlaka zakho (kanye nokubonisa ukubalwa).
Ikhithi Yendawo nge-Google - isisombululo sokumisa esisodwa sokuphaka, ukuphatha, nokuthola ukuqonda kusuka kumathuluzi we-Google abucayi ukwenza isayithi liphumelele kuwebhu. Inikeza imininingwane enegunya, esesikhathini evela kwimikhiqizo eminingi ye-Google ngqo kudeshibhodi ye-WordPress yokufinyelela okulula, konke mahhala.
Ukungena Kwesikhashana Ngaphandle Kwephasiwedi - kunezikhathi lapho ufuna ukunikeza khona itimu noma umthuthukisi we-plugin ngokufinyelela kwesikhashana kusibonelo sakho se-WordPress... kodwa awukwazi ukwenza inqubo yokuthi babhalise futhi uthole amaphasiwedi nge-imeyili. Le plugin inikeza isixhumanisi esiqondile, sesikhashana abangasisebenzisa ukuze bangene kusayithi lakho ukuze bakusize. Uyakwazi nokusetha isikhathi sokuphelelwa yisikhathi.
I-WP Mail Log - uma wake wazibuza ukuthi ngabe ama-imeyili athunyelwa ngaphandle kwesayithi lakho nge-PHP noma nge-SMTP, i-WP Mail Log Ingabe i-plugin ebucayi yokulandela imiyalezo yakho ephumayo.
I-WP Yonke Ukungenisa - Iqoqo eliguquguquka ngendlela emangalisayo lama-plugin okungenisa nokuthekelisa idatha kusuka kumafayela e-XML ne-CSV ukungena nokuphuma ku-WordPress kanye nenani lama-plugin adumile.
Izintandokazi ze-WordPress Plugins Zokuhlela Nokuhlela
Amathuluzi Ombhalo Ocebile Athuthukile we-Gutenberg – Uma udinga esinye isitayela esengeziwe kumhleli ozenzakalelayo we-Gutenberg nge-WordPress, okuhlanganisa ikhodi, umbhalo ophansi, umbhalo ongenhla, umbhalo ophakathi komugqa, nokuhlelwa kombala wangemuva… le-plugin elula inikeza wonke amakhono.
I-Elementor Pro - Isihleli sendabuko seWordPress sinokuningi okufiselekayo futhi kungakhathaza kakhulu. U-Elementor usekhulile ngomhleli omnandi we-WYSIWYG, amafomu, ukuhlanganiswa, ukwakheka, izifanekiso, nezinye izinketho eziningi ezinama-plugins ahambisana nazo ukuze anwebeke. Angiqiniseki ukuthi ngiyoke ngakhe isayithi ngaphandle kwalo!
Izintandokazi ze-WordPress Plugins zokuqinisa okuqukethwe kwakho kanye nokufinyelela kwakho
Izinkambu Zenkambiso Ethuthukile - Kwenze kube lula kubaphathi, ababhali nabahleli ukwenza ngokwezifiso iwebhusayithi yakho ngokwenza lula ukuphathwa kwayo. I-ACF ilula ukuyisebenzisa futhi yenza ngezifiso kakhulu. Thenga izengezo ezinelayisense ezingeziwe zezinye izici ezinhle.
I-ARVE Embedder Ephendulayo Ethuthukile Yevidiyo - Amavidiyo ashumekiwe angaba yiphupho elibi lokugcina izakhiwo eziphendulayo kusayithi lakho. I-WordPress ishumeka amapulatifomu amaningi, kepha ayiqinisekisi ukuthi ayaphendula.
Izinkinobho zokwabelana ezilula zomphakathi - Kukuvumela ukuthi wabelane, uqaphe futhi wandise ithrafikhi yakho yezenhlalo ngokubulawa ngokwezifiso futhi analytics izici.
I-WP SMTP elula - Ukuthumela izaziso ze-WordPress, izexwayiso, nama-imeyili azenzakalelayo kusuka kumhlinzeki wakho wokubamba ucela inkinga. Ukusebenzisa i-SMTP ukuthumela i-imeyili ngomhlinzeki wesevisi wakho ogunyaziwe kuphephe kakhulu futhi kuzoba namathuba aphezulu okulethwa. Sinezindatshana ezibonisa ukuthi ungasetha kanjani lokhu -Google or Microsoft.
FeedPress - I-FeedPress iphatha ngokuzenzakalela ukuqondiswa kokuphakelayo futhi ivuselele okuphakelayo kwakho ngesikhathi sangempela njalo uma ushicilela okuthunyelwe okusha.
I-OneSignal - i-push mobile, i-web push, i-imeyili, kanye nemiyalezo engaphakathi nohlelo. Yazisa ababhalisile ngokuthunyelwe ngakunye okushicilelwe.
Iwijethi Yesidlali Sokudla sePodcast - Le yiwijethi engiyithuthukisile ethandwa kakhulu. Uma ubamba i-podcast yakho kwenye indawo, ungafaka okuphakelayo bese ufaka i-podcast yakho kubha yakho eseceleni noma usebenzisa i-shortcode ngaphakathi kwekhasi noma okuthunyelwe. Isebenzisa isidlali somsindo se-WordPress 'se-WordPress.
I-GTranslate - Sebenzisa le-plugin kanye nensizakalo ukuhumusha ngokuzenzakalela okuqukethwe kwakho futhi ulungiselele isiza sakho se-WordPress ukuthola ukufinyelela kwamazwe omhlaba jikelele.
Shicilela ku-Apple News - Inika amandla okuqukethwe kwebhulogi lakho le-WordPress ukuthi lishicilelwe esiteshini sakho se-Apple News.
Okusanda - Faka iwijethi ezinyaweni zakho ngokuqukethwe kwakho kwakamuva kakhulu ukuhlinzeka ngezixhumanisi ezinhle zangaphakathi nokuzibandakanya. Le plugin inethoni yezinketho zokwenza ngokwezifiso.
Vuselela Okuthunyelwe Okudala - Kungani umane wabelana ngokuqukethwe kwakho kanye lapho ungabelana ngokuqukethwe okuhle kaninginingi… ukushayela ukuzibandakanya nokuqaphela utshalomali lwakho lokuqukethwe?
Okudumile kwe-WordPress - Faka iwijethi ezinyaweni zakho ngokuqukethwe kwakho okudume kakhulu ukugcina umfutho kulokho okuthunyelwe namakhasi. Le plugin yakhiwe ngumbhali ofanayo Wamuva, futhi inezinye izifanekiso ezakhelwe ngaphakathi ezikulungele ukuhamba nazo!
WP PDF - Shumeka ama-PDF asebenziseka kalula kwi-WordPress - futhi uvimbele ababukeli bakho ekulandeni noma ekuphrinteni amafayela wakho woqobo.
I-Avatar yomsebenzisi we-WP - I-WordPress okwamanje ikuvumela kuphela ukuthi usebenzise ama-avatar wesiko alayishwa ngawo I-Gravatar. I-WP User Avatar ikuvumela ukuthi usebenzise noma yisiphi isithombe esilayishwe kwi-Media Library yakho njenge-avatar.
Izintandokazi ze-WordPress Plugins zokuthuthukisa isayithi lakho le-WordPress
Isikhethi Sokuqamba Izithombe - Kwandisa izithombe nezithonjana endizeni, okukuvumela ukuthi wehlise usayizi wesithombe nezikhathi zokulayisha ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi.
I-StackPath CDN - Finyelela izikhathi zokulayisha ikhasi ngokushesha, amazinga angcono weGoogle, nokuguqulwa okuningi ngeStackPath CDN. Ukusetha kulula futhi kuthatha imizuzu kuphela.
I-WordPress SEO - I-Rank Math iyi-SEO Plugin engasindi efaka ukuhlaziywa kokuqukethwe ekhasini, ama-sitemaps weXML, amazwibela acebile, ukuqondiswa kabusha, ukuqapha okungama-404, kanye nezinye izici zethoni. Uhlobo lwe-pro lunokusekelwa okumangazayo kwamazwibela acebile, indawo eningi, nokuningi. Okuhle kunakho konke, ikhodi ibhalwe kahle ngendlela emangalisayo futhi ayinciphisi isiza sakho njengamanye ama-plugins we-WordPress SEO.
I-WP Rocket - Yenza i-WordPress ilayishe ngokushesha ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa. Lokhu kwaziwa njenge-plugin enamandla kunawo wonke okulondolozwa kwesikhashana yi-WordPress Experts.
I-WordPress Plugin Eyintandokazi Yekhukhi kanye Nokuthobela Idatha
Njengebhizinisi, udinga ukuthobela imithethonqubo yamazwe omhlaba, yenhlangano kanye neyesifundazwe elawula ukuthi uyilandelela kanjani futhi uyigcina kanjani imininingwane yezivakashi zakho. Bengisebenzisa iwijethi yeJetpack yezimvume zekhukhi, kepha imvamisa yayilayisha ngaphezu kwesisodwa futhi ingenazinketho zokwenza ngokwezifiso.
Imvume ye-GDPR Cookie (CCPA Ready) - I-plugin ye-GDPR Cookie Consent izokusiza ekwenzeni iwebhusayithi yakho i-GDPR (RGPD, DSVGO) ithobele. Ngaphezu kokuhambisana nale plugin ye-GDPR WordPress futhi kusekela ukuthobela ikhukhi ngokuya nge-LGPD yeBrazil neCalifornia Consumer Privacy Act (CCPA) okuyisimiso sombuso okuhloswe ngaso ukuthuthukisa amalungelo obumfihlo nokuvikelwa kwabathengi kwezakhamizi zaseCalifornia.
Izintandokazi ze-WordPress Plugins zokuvikela isayithi lakho le-WordPress
Akismet - I-plugin ethandwa kakhulu yiWordPress, i-Akismet kungenzeka ibe yindlela engcono kunazo zonke emhlabeni yokuvikela ibhulogi yakho ekuphawuleni nakuma-trackback ogaxekile. Musa nje ukuyifaka, bika lawo majeqe!
VaultPress - Vikela okuqukethwe kwakho, izingqikithi, ama-plugin, nezilungiselelo ngesipele sesikhathi sangempela kanye nokuskena kokuvikeleka okuzenzakalelayo.
WP Umsebenzi Log - I-plugin ye-log yomsebenzi ye-WordPress ebanzi kakhulu yokugcina irekhodi lezinguquko zabasebenzisi, ukuxazulula izinkinga kalula, nokuhlonza ukuziphatha okusolisayo kusenesikhathi ukuze kuvinjwe ama-hacks anonya. Uma ubhalisa ku I-Jetpack Security or Jetpack Professional uthola nelogi Yomsebenzi ebanzi.
Udinga ama-plugins amaningi?
Kunama-plugins amahle kakhulu, akhokhelwayo asekelwa ngokuphelele kuwo I-Themeforest ongeke ukuthole kwenye indawo. Inkampani yabazali, i-Envato, yenza umsebenzi omuhle wokuqinisekisa ukuthi ama-plugins asekelwa futhi avuselelwa kaningi.
Ukudalula: Ngisebenzisa amakhodi wokuhambisana kukho konke lokhu okuthunyelwe, ngicela uxhase ukushicilelwa kwami ​​ngokuchofoza kuzo futhi uzithenge!
Tags: Akismetama-plugins amahle kakhulubest WordPress pluginsama-plugin we-wordpress yebhizinisiccpaCdni-plugin yokuhambisanainqubomgomo yekhukhiphinda okuthunyelweama-plugins owathandayoama-plugins we-wordpress owathandayogdpri-google site kitgutenbergisidlali se-podcastI-PubSubHubbubokusalungiswa okusheshayo ukufinyelelaizinga lezibaloukuqondisa kabushaukuhlela umbhalo ocebileisitakiamawijethi wewijethiamawijethiWordPressirekhodi lokuhlola i-wordpressi-plugin yokusekelayo ye-wordpressi-wordpress cdni-plugin ye-wordpress cdni-plugin ye-wordpress ecommerceamafomu we-wordpress pluginplugins wordpressi-plugin ye-wordpress podcasti-plugins ye-wordpress smtpi-plugin ye-wordpress yokwabelana nomphakathirockp ye-wp
I-TaskHuman: I-Real-Time Digital Sales Coaching Platform
Jan 5, 2015 ngo-11: 21 PM
Uhlu olukhulu ne-infographic. Njengenjwayelo, ezinye izintandokazi ezindala, ezijwayelekile nezinye ezintsha kuzofanele ngizihlole! Siyabonga ngokwabelana.
Jan 6, 2015 ngo-1: 53 PM
Jun 28, 2015 ku-11: 34 PM
Angazi ukuthi ungasho kanjani ukuthi elinye laleli khasi liyafundeka? Bekufanele ngiphenye maphakathi nengxenye ukuze ngifunde okuthile bese kungafanele. Uma ucabanga ibha eseceleni engu-3/4 yezinkinobho ezinemibala egqamile kanye ne-pop up eqhubeka ingicasula ukumaketha kwebhizinisi, bese ulahlekile. Ngikhathaze ngokubhala lokhu kuphela ukuze ngihlanganyele okuthile nawe, njengoba unami. Futhi lokho kusika ku-CHASE. Mhlawumbe ubuchwepheshe obudala besikole nobuchwepheshe bewebhusayithi buhamba ngejubane. Kepha ukumaketha kusengokwakha oxhumana nabo bebhizinisi nolwazi lokuqoqa izimbangi zakho? Ngeke kungimangaze uma iningi lokufunda kwakho kuyi-colourblind. Impela ngihamba ngaleyo ndlela.
Jun 29, 2015 ku-12: 31 PM
Siyabonga ngempendulo, Steve. Sikunikeza okuqukethwe lapha mahhala kuwe futhi ukufundwa kwethu kukhuphuke ngamadijithi aphindwe kabili iminyaka eminingana. Ngithambekele ngokwengeziwe ukuqhubeka ngisebenza ngakulabalandeli bethu, abakhangisi bethu, nabaxhasi bethu. Izilokotho ezinhle.
Jul 9, 2015 ngo-9: 48 PM
Sawubona Douglas! Ibhulogi enentshisekelo onayo lapha. Usizo olukhulu. Ngiyabonga.
Jul 10, 2015 ngo-12: 21 PM
Ngiyabonga! Futhi wamukelekile!